Tolo-dalàna momba ny fananan-tany : mila fanitsiana na fanafoana tanteraka | NewsMada
Tolo-dalàna momba ny fananan-tany : mila fanitsiana na fanafoana tanteraka
Niantso ben’ny Tanàna maro avy eto amin’ny faritra Analamanga ny vondron’ny fiarahamonim-pirenena tarihin’ny Sehatra iombonana ho an’ny fananan-tany (Sif) sy ny Rohy. Niarahan’izy ireo nidinika ny hanairana ireo depiote ny amin’ny tolo-dalana sasany (119, 120, 121…) momba ny fananan-tany.
Andininy maromaro ao amin’ny tolo-dalana momba ny fananan-tany haroso eny amin’ny Antenimierampirenena, ny herinandro ho avy io, mampanahy mafy ny fiarahamonim-pirenena sao hiafara amin’ny fanesorana ireo tantsaha efa nampiasa ny tany nivelomany nandritra ny taona maro. Manao izay fanairana izay ny fiarahamonim-pirenena miaraka amin’ireo ben’ny Tanàna ireo ho fiarovana ny vahoaka tantsaha any ambanivohitra, izay efa nifofotra niasa mafy amina velaran-tany novoleny. Maro amin’ireny tany fiveloman’ny tantsaha ireny ny tsy mbola misoratra aminy (titre), saingy izay aloha ny zava-misy, misy miasa efa maherin’ny 20 taona.
Mampanahy ny Sif amin’izany tolo-dalana izany ny mety fanafoanana ny Birao iombonana ho an’ny fananan-tany (Bif) any amin’ireo kaominina ambanivohitra. Araka izay lalàna izay ihany, raha ny tombatomban’ny firaisamonim-pirenena, takina haverina ho tanim-panjakana ireny tany ireny, ary mety hiafara amin’ny famarotan’ny fanjakana azy indray amin’ny vahiny.
Loza mitatao amin’ny tantsaha
Koa manana andraikitra lehibe amin’izany ny ben’ny Tanàna miaraka amin’ny sefom-pokontany any an-toerana, mahalala tsara ny tantaran’ireo tany ao aminy. Nohamafisin’ny Sif fa tsy ny lalàna rehetra akory no kianina fa ireo andininy sasany, karazana loza mitatao amin’ny tantsaha. Mila fanitsiana ireny lalàna ireny na fanafoanana tanteraka. Araka izany, takin’ny firaisamonim-pirenena ny hanoratana ireo tany ireo amin’ny olona efa ela niasana sy nipetraka aminy. Koa tokony handinika tsara izany ireo depiote, mba tsy hisy fiantraikany amin’ny fiainam-bahoaka ny fandaniana ireny tolo-dalana ireny.
Tsy zava-baovao intsony ankehitriny ny fahamaroan’ny olona very tany, nefa tompony ara-dalàna izao na amin’ny tanàn-dehibe aza. Tsy tambo isaina ireo manana olana momba izany eny amin’ny fitsarana, mampanahy ny tena tompony. Koa vao mainka mampidi-kizo ireo manana ny rariny sy hitsiny raha sanatria mbola laniana eny amin’ny Antenimierampirenena ireo andininy tsy mampandry mandry ireo.